Blog – The Voyager
In pursuit of snow
It isagreat thing to follow your passion. Having complete dedication to something in an area of life is required, whether it’s your work or your hobbies. Seeing snow in real life is one of my travel bucket list item. Some people live in cold weather amongst the snowy mountains tops. Some people live […]
Village Vibe in Sariska
So, before starting of any adventures in 2018, I just started withadigital detox trip. It wasaroad trip and I really felt nice travelling withagroup afteralong time. We spent two days in the middle of nowhere, actually it’savillage named Tehla near Sariska Tiger Reserve, Alwar district […]
Goodness by the Ganga
India isacountry for explorers who are seeking culture, heritage, spirituality, mountains, beaches and unexplored natural beauty. As part of our exploration, this time we headed to ‘Rishikesh’, where the Ganges River comes down from the Himalayas. The5hour road trip from Delhi to Rishikesh will keep one engaged while the landscape changes […]
Pink Diary in Jaipur (Part II)
Day2We woke upalittle late on the second day’s morning and had our self-service breakfast with some bread and bananas. The hostel itself hasagood scenic view from the topmost floor which has the background of Aravalli hills and one can even spot the fort walls atafar distance. After […]
Pink Diary in Jaipur (Part I)
I was surprised to see the layers of Rock Mountains in the desert state, Rajasthan. We were on our5hours road trip from Delhi to the world famous pink city of India, Jaipur. The oldest range of fold Rock Mountains (called Aravalli Range) of India was welcoming us to Jaipur. As it was winter, […]
Sharing my Travel Notes for Bagan / ပုဂံသွားလည်မယ့်သူတွေအတွက် ချောရဲ့ ခရီးသွားမှတ်စုလေးကို Share ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
* ရှေ့နှစ်က ပုဂံ သွားလည်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲရင်း ချော ကိုယ်တိုင် ချရေးထားတဲ့ မှတ်စု ဖြစ်တာမို့ ကြော်ငြာပေးခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ)မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကြိုပြောပါရစေရှင်။ တိုတိုရှင်းရှင်း လိုအပ်မယ့်အရာလေးတွေချရေးထားတာမို့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ❤️???️? * Disclaimer: This is notasponsored or advertisement post. These are my personal notes that I had written down while planning for my trip to Bagan last year. တည်းခိုစရာနေရာများ / Accommodations in Bagan ?️?? အခုနောက်ပိုင်း တည်းခိုစရာနေရာတွေက ပုဂံမြို့သစ်နဲ့ညောင်ဦးတစ်ဝိုက်မှာ […]
ရှေ့တစ်ပတ်က စူပါဟီးရိုးတွေအစုံပါတဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ကားပါ။ ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် အပြင်ထွက်ပြီး ရုပ်ရှင်ရုံမှာသွားကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက အဓိကကျပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားတယ်။ လက်မှတ်ဝယ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ မှောင်အတိကျနေတဲ့ ခန်းမကြီးထဲဝင်လိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ မီးတွေလင်းလာပြီး ရုပ်ရှင်စပြတော့တာပဲ။ ချောအပါအဝင် အဲဒီရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာရှိနေတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ သိပ်စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ခရီးတစ်ခုထွက်ခဲ့ရသလိုပါပဲ။ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးစားလိုက် အအေးလေးသောက်လိုက် ရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက်နဲ့ တကယ့်ဇိမ်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတို့ရော လှလှပပဝတ်စားပြီး အပြင်ထွက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်လား။ ဘယ်တုန်းက ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် အဝေးပြေးကား၊ လေယာဉ်ပေါ် တို့ကို ဘယ်တုန်းက နောက်ဆုံး တက်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ချော ဆိုလိုတာက သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ မိတ်ကပ်လိမ်း၊ အလှပြင်၊ သစ်လွင်တောက်ပစွာနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဖြစ်လား။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကျွေးမယ့် အစားအသောက်တွေကိုရော ဘယ်တုန်းက နောက်ဆုံး စောင့်မျှော်ခဲ့ဖူးလဲ။ ချော ဟိုတစ်လောကမှ […]